काठमाडौंको महंगीमा राहत बनेका यी पाँच रेस्टुरेन्ट तथा होटल, जहाँ उपभोक्ताको भीड लाग्छ – Mission Khabar
काठमाडौंको महंगीमा राहत बनेका यी पाँच रेस्टुरेन्ट तथा होटल, जहाँ उपभोक्ताको भीड लाग्छ
मिसन खबर ३० असार २०७५, शनिबार ०१:५५
काठमाडौं–अधिकांश नेपालीले शिक्षा, अवशर र संभावनाको खोजी गर्ने शहर हो, काठमाडौं । यहाँको अभाव, समस्या र कोलाहलता भोगेपछि मात्रै थाहा हुन्छ । अधिकांशको सपनाको शहर काठमाडौंमा अहिले पनि लाखौँले संघर्ष भोगिरहेका छन् । धेरैका लागि काठमाडौं सिकाई बन्दैगर्दा आफै भने माथी उठ्न सकिरहेको छैन राजधानी शहर ।
हामी यहाँ यहि कोलाहलता र भिडभाडमा मध्यमबर्गियहरुको दैनिकिमा सहजता थप्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । ठूल्ठुला सपनाको पोको बेकेर काठमाडौं आउनेहरुका लागि काठमाडौंको महंगीको प्रभाव निक्कै धेरै छ । यहाँको बसाई चर्को महंगीले झन–झन कष्टकर बनिरहेको छ । तर महंगीको यो भीड र कोलाहलतामा केही अवशर र सुविधा भने पक्कै छन् ।
काठमाडौंको व्यस्तता र थकान झेल्न कहिलेकाँही कोठा बाहिर गएर खाने अनि खानाको स्वादसँग रमाउने चाहना अधिकांशमा हुन्छ । तर महंगो मूल्य चुकाउनुपर्ने चिन्ताले थुप्रैको यो सपना पुरा भएको हुँदैन । तर यहि काठमाडौंमा केही यस्ता होटल तथा रेस्टुरेन्टहरु पनि छन्, जुन होटल मध्यम र निम्न बर्गका लागि सहयोगी बनिरहेका छन् ।
यी पाँच स्थानका रेष्टुरेन्ट जहाँ तपाईले निक्कै सस्तोमा सफा र स्वादिष्ट खाजा र खाना पाउनुहुनेछ ।
१.वीर चमेना गृह :
देशकै जेठो अस्पताल परिसरमा सञ्चालित यो रेष्टुरेन्ट अस्पतालमा पुग्नेहरुका लागि सुविधा र सहयोगी बनिरहेको छ । जहाँ सोचेभन्दा निक्कै सस्तोमा खाना खान पाईन्छ । ६० रुपैयामा सादा खाना पाईने रेष्टुरेन्टमा चिकन खानाको लागि ११० र मटन खानाको १५० मात्रै तिरेपुग्छ । विधिन्न किसिमको खाजा समेत पाईने यो चमेना गृहले दैनिक करिब २ सय जनालाई खाना खुवाउँछ ।
२. सिभिल क्याफेटेरिया :
बानेश्वर मिनभवन क्षेत्रमा रहेको सिभिल हस्पिटल थाहा नहुने कमै होलान । तर यहाँ सञ्चालित क्याफेटेरियामा सफा र स्वस्थ खाना खान पाईन्छ भन्ने कमैलाई मात्र थाहा छ । पहिला भुक्तानी गरेर टोकन मार्फत अर्डर गर्नुपर्ने यो क्याफेमा सादा खानाको ८५ चिकनको १२५ र मटन खानाको १८५ तिरे पुग्छ । जहाँ आफूले रोजे अनुसारको खाजाको समेत व्यवस्था छ ।
३. श्री दोलखा दिब्य गेष्ट हाउस एण्ड भोजनालय :
व्यापारिक गतिबिधि बढी चल्ने काठमाडौंको महाबौद्ध क्षेत्रमा सञ्चालित यो होटलको निम्न र मध्यमबर्गियहरुका लागि उपयोगी छ । हुँनत, यहाँको सफा र स्वादिष्ट खानाले धेरैको मन तानेको छ । सादा खानाको ७०, चिकन खानाको १०० र मटन खानाको १५० तिनुपर्ने यो होटलमा ग्राहकको निक्कै भिड लाग्छ । दैनिक ३ सय बढीलाई खाना खुवाउने यो होटलले खाजाको विधिन्न परिकार पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
४. नेपाल विद्युत प्राधिकरण क्यान्टिन :
धेरैलाई यहाँको क्यान्टिन बारेको जानकारी नै छैन । स्थानीय कर्मचारीलाई बढी सुविधा दिएको यो क्यान्टिनमा बाहिरबाट निक्कै कम पुग्ने गर्छन । तर पुगेपछि भने ग्राहक दोहोरिएर जान्छन । अण्डर ग्राउण्डमा रहेको क्यान्टिन एकान्तको मजा लिन र स्वाद परिवर्तनका लागि उपयोगी बन्नसक्छ । सादा खाना ७५ मा चिकन १०० पाईने यहाँ मटन खानाका लागि १२५ मात्रै तिरेपुग्छ ।
५. ए टु जेड भोजनालय :
काठमाडौं बत्तिसपुतलीमा रहेको ए टु जेड को नाम भने अन्यको तुलनामा केही बढी चर्चामा छ । काठमाडौंका केही स्थानमा नयाँ शाखा समेत विस्तार गर्न सफल ए टु जेड मम एण्ड सेकुवाले सादा खाना ८० अमलेट खाना ११०, चिकन खाना १५०, माछा खाना १५० र मटन खाना २२० मा खुवाउदै आएको छ । जहाँ खाजाको पनि व्यवस्था छ ।
यी होटल तथा रेस्टुरेन्टले आम सर्वसाधारणलाई सहुलियत दरमा खाना, खाजा खुवाईरहदा उनीहरुको आम्दानी पनि बढेको छ । दिनमै सयौँ उपभोक्ता पाएका यी होटलको महिनामा लाखौँको आम्दानी पनि गरिरहेका छन् । निम्न बर्गका उपभोक्ताका लागि महंगीमा राहत बनिरहेका यस्ता होटलले स्वाद फेर्ने र कामको व्यस्तताका कारण बाहिरै खानुपर्ने उपभोक्ताको मन जितेका छन् ।
क्याटेगोरी : अर्थ / रोजगार, होटल / रेस्टुरेन्ट